Daawo NUSOJ oo Siminaar Muqdisho ugu qabatay Suxufiyiin. | RADIO Haatuf
Home / WARARKA MAANTA / Daawo NUSOJ oo Siminaar Muqdisho ugu qabatay Suxufiyiin.
Daawo NUSOJ oo Siminaar Muqdisho ugu qabatay Suxufiyiin.
OgaalFM- Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa maanta xarunta Muqdisho ay ku leedahay waxa ay kulan Siminaar ah ugu qabatay Wariyeyaal ka socday warbaahinada iyo TV-yada ku yaala magaalada Muqdisho.
Siminaarkan ayaa waxaa ka soo qeyb galay Xubno ka socday NUSOJ Wariyeyaal ka kala tirsan Idaacadaha, TV-yada iyo Wargeysyada ku yaala dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Siminaarka maanta ay qabatay Ururka NUSOJ ayaa ahaa mid soconayay Hal maalin.
Gudoomiyaha Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed Maahir Aadan Jaamac ayaa kulanka goob joog ka ahaa waxaana uu sheegay in Siminaarkan muhiimadiisa ugu weyn ee lo qabtay uu ahaa sidii loo kala duwi lahaa Barnaamijyada xilliyada Ramadaanka iyo waqtiyada kale ee caadiga ah.
Waxa uu sheegay in Siminaarkan maanta la qabtay ay xigi doonaan kuwa kale oo lagu qaban doono magaalooyinka waaweyn ee gobolada dalka, waxaana magaalooyinkaas ka mid ah Garowe, Beydhabo, Kismaayo iyo Dhuusamareeb.
Suxufiyiintii ka soo qeyb galay Kulanka ayaa markii uu soo idlaaday Siminaarka waxa ay sheegeen in waxyaabo badan ay ka faa’ideen sidoo kalena ay mahad gaar ah u celiyeen Ururka NUSOJ.
Previous: DHAGEYSO: Dowladda oo dhiiragalinaysa ganacsiga gaarka ah.
Next: Ammaanka magaalada Baydhabo oo la adkeeyay.